Kolontsaina, fivavahana, fialantsasatra ary filozofika Thailandy Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Kolontsaina, Fivavahana, fialantsasatra ary filozofianan'i Thailand
Thailand. Kolontsaina, fialantsasatra, fomba amam-panao, filozofia
Ny tena mahafinaritra an'i Thailandy dia ny rivo-piainana mafana sy sariaka! Ara-drariny ny fitsidihana ity firenena ity tsy noho ny fivarotana fotsiny ihany, fa koa ny fampahafantarana miaraka amin'ny kolontsaina nasionaly manan-karena.
Filozofa any Thailand
Fivavahana any Thailand
Fomban-drazana sy fomba fanao any Thailandy
Muay Thai (Zavakanto marim-pirenena)
Fety any Thailand
Filosofia any Thailandy (Sabai, Sanuk, Suai)
Amin'ity sarin'i Buddha ity, ny filozofia rehetra any Thailand dia hita tsara 🙂
Ny fototry ny fijerena filozofia Thai dia ahitana ny "Cs telo". Izany dia Sanuk, Sabai, Suai. Ilaina ny mitadidy ireo teny ireo na iza na iza te ho tonga any Thailandy farafahakeliny.
Sanuk dia teny iray maneho ny tsotsotra tsotra ary miaraka amin'izany foto-kevitra tsara izany, akaikin'ny "fifaliana", Rosiana. Sanuk koa rehefa mijery falifaly sy mifaly tsara. Azontsika lazaina fa ny Sanuk dia misy ny fampiononana ara-batana ary koa ny fifaliana amin'ny fiainana kely isan-karazany.
Buddha, mahatsiaro tena milamina, ary miantso ireo mpanara-dia azy 🙂
Sabay dia foto-kevitra manan-danja iray izay azo adika amin'ny teny Rosiana: "mahazo aina", "mahatsiaro mazava", "milamina", "mahatsiaro ho tsara", "tsy manam-pandrosoana". Izany dia fanina, ny tsy fisian'ny "stress". Mino ny vahoaka Thailandey fa tsy ilaina ny mampihetsi-po, mitebiteby ary mihanaka ny tebiteby. Ny olana dia tokony esorina, tsy ny famoronana azy ireo ho an'ny tenanao ihany, fa tsy ho an'ny hafa ary mankafy ny fiainanao amin'ny alalàn'ny fahafinaretana isan-karazany tsy misy fisalasalana. Azontsika lazaina fa ny sabai dia mitovitovy amin'ny fampiononana ara-panahy.
Io fotokevitra io dia midika hoe hatsarana, ary koa ny faniriana azy io amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainana. Anisan'izany ny fitondran-tena tsara ao amin'ny fiaraha-monina, ny fahaizana mitafy tsara tarehy, manorina trano tsara tarehy ary miteny mahafinaritra. Indraindray ny vahoaka Thailandey dia tonga eo amin'ny "varavarankely mitafy" azy ireo amin'ny fitiavan'izy ireo ny suai (hatsarana). Miezaka ny hanao akanjo lafo vidy kokoa izy ireo, handravaka ny trano misy loko marevaka, matetika mamirapiratra ary manangana tempoly maro voaravaka volamena.
Ny filam-piainan'ny vahoaka Thailandey dia miroborobo amin'ny zava-misy fa ny tontolontsika dia natao hifaly, ka izay rehetra eo aminy dia tsy maintsy mahafinaritra. Tokony ho voahodidina hatsaran-tarehy ny olona. Mikatsaka ny hatsaran-tarehy, ny mponin'i Thailand dia mamboly izay rehetra manodidina azy ary miezaka manilika ny fanitsakitsahana ny firaisankina voajanahary. Miharihary izany eo amin'ny haben'ny zaridaina tsara sy ny fandriana voninkazo akaikin'ny trano.
Ny fitsipika iray lehibe dia ny fitsipiky ny asa tsara..
Mino ny vahoaka Thailandy fa ny asa soa dia mety hahatratra karma ankasitrahana ary fiainana sambatra aorian'ny fahaterahana manaraka.
Fihetsika Thais amin'ny olana
Amin'ny ankapobeny, ireo mponina ao Thailandy dia liana tokoa amin'ny fampiononana sy ny fahafaham-po. Io fepetra io dia antsoina hoe "sabai". Rehefa be dia be i Sabaya dia antsoina izany fepetra izany Sabai Sabai. Io teny io dia manondro ny tsy fisian'ny olana. Mino ny vahoaka Thailandey fa raha tsy eo ny olana tamin'ny voalohany, dia tsy misy dikany ny famoronana azy ireo. Ny filozofia azy ireo dia miondrika mankany amin'ny fiainana tsy misy dikany ho an'ny fahafinaretana. Noho izany, izy ireo dia miezaka miasa amin'ny asa izay misy an'i Sabai. Ny tsy fisian'ny sabai dia nanery ny Thai hitady asa hafa.
Fihetsika Thais ho an'ny vola
Tsotra ny vola any Thailandy. Raha manam-bola ianao dia matetika izy ireo no manandrana mandany vola haingana kokoa. Ary rehefa tsy eo izy ireo dia nindram-bola tamin'ny namana sy mpifanila trano aminy ny vahoaka Thailandey. Zava-dehibe amin'ny mponina ao an-toerana ny fitahiram-bola. Mihevitra ny ho avy ny Thai. Ny vola matetika dia lany haingana kokoa noho ny tratra. Mipetraka eto izao ny olona, ​​ary afa-po amin'izay ananany. Ny tontolon'izy ireo dia iharan'ny famonoana olona - toa ny Bodista marina, mino ny vahoaka Thailandey fa ny anjarany tsirairay avy dia tsy azo ovaina intsony, noho io antony io dia tsy misy dikany indrindra ny fiezahana mitady zavatra.
Ny kolontsaina Thai dia nivoatra tato anatin'ny taonjato maro. Ny dingana ara-tantara tamin'ny fananganana azy dia ny fanjakana medieval an'i Sukhothai, ary koa ny fanjakana Rattanakosin sy Ayutthaya eras. Nisy fiantraikany lehibe tamin'ny kolontsain'ireo firenena Azia hafa. Ho an'ny tsirairay, ny hery mahery vaika avy amin'ny kolontsaina Sina sy India dia mbola mahatsapa. Ny anjara toerana lehibe indrindra amin'ny famolavolana ny kolontsaina Thailand dia nilalao tamin'ny Buddhism.
Manodidina ny 94% amin'ny mponina Thailandey no bodista, indrindra ny sekoly Theravada, ary any amin'ny sekoly Mahayana no kely kokoa. Ny silamo dia mahatratra 5% eo ho eo, ny Kristiana - eo amin'ny 1% eo amin'ny mponina. Mahazo fanohanana be avy amin'ny governemanta ny Bodisma eto; mahazo tombony ny fanjakana, anisan'izany ny fampiasana malalaka ny fitateram-bahoaka.
Fanahin'ny trano any Thailandy (trano maoderina mini)
Tsara homarihina fa ny Buddhism eto amin'ity firenena ity dia miaraka amina animism - ny finoana nentim-paharazana amin'ny fanahy. Ny ankamaroan'ny vahoaka Thai dia mivavaka amin'i San Phra Phum, ilay toe-tsaina amin'ny trano. Amin'io lafiny io, trano kely dia napetraka eo akaikin'ny fonenany, izay honenan'ny zava-manitra. Nomena sakafo sy rano ihany koa izy ireo ho fanomezana, hany ka mahatsapa tsara sy mahazo aina ny fanahy. Mino ny vahoaka Thailandey fa ny fanahy izay tsy tia ny fanatitra dia mety hiteraka korontana. Ankoatry ny faritany manodidina ny trano fonenana, ny trano ho an'ny fanahy velona dia hita amin'ny toerana be olona sy eny an-dàlana ihany.
Talohan'ny nahatongavan'ny Buddhism School Buddhism, dia nanjaka ny sekoly Mahayana sy ny Hindouisme. Izy ireo dia nitaona ny vahoaka maoderina teo amin'ny mponina eo an-toerana. Ny fitaomana ny Mahayana dia azo zahana amin'ny fisian'ny endrika toa an'i Lokesvara. Ireo mpandray anjara Avalokiteshvara sy Bodhisattva dia miseho ao amin'ny firaketana an-toerana.
Ny Bodista dia manaraka ny tolo-kevitry ny fanintsanana ny Buddha. Noho izany, ny fombafomba mifandray amin'io fivavahana io dia atao na aiza na aiza:
Ny maraina maraina, matetika ianao mahita ny moanina izay manangona fiantrana.
Ny lovantsofina dia nanondro fa ny zatovo rehetra, rehefa afaka 20 taona, dia mipetraka ao amin'ny monasitera iray mba hahafantarany ny fototry ny Bodisma.
Ny vehivavy dia mety ho mpandray an-tsitrapo amin'ny monasitera.
Ho fanomezam-boninahitra ny mpampianatra azy ireo dia manangana tempoly ny vahoaka Thailandey, ka ny an'arivony dia an'aliny ankehitriny. Na izany aza, ny fananganana tempoly vaovao dia fahamendrehana tena mendrika. Ny mino ny Bodista dia manome am-pitiavana izay rehetra ilainy, manao sorona amim-pahalalahan-tanana ho an'ny filan'ny tempoly.
Araka ny fomba fanao Thai, ny loha dia toerana masina, trano fitehirizan'ny fanahin'olombelona, ​​noho izany fihetsehana maneso ny lohan'ny olon-tsy fantatrafisehoan'ny fitondran-tena ratsy loatra.
Araka ny fomba amam-panao eo an-toerana ihany koa Tsy afaka maka sary ny tempolista bodista ianao. Na izany aza, ho fanitsakitsahana tsy vitan'ny fomban-drazana ihany fa ny lalàna ihany koa! Ny fakana sary toy izany dia feno sazy henjana sy fanalam-baraka ataon'ny polisy Thailandey. Mbola tsy faly rehefa mampiseho ny fihetseham-pony eny an-dalambe ny mpitiaeny fa na mamihina.
Ny fomba fanao sasany dia mifandray amin'ny fananganana trano. Raha haorina eo akaikin'ny renirano na farihy ny trano, dia tsy maintsy apetraka amin'ny fako mba tsy hisian'ny tondra-drano raha misy tondra-drano. Mandritra izany fotoana izany, nofonosiny amin'ny kasety ny tadio voalohany - amin'ny fomba hanasana ny trano ho fanahy izay hihazona rivo-piainana mahafinaritra.
Miarahaba ny Thai
Ny fanao Thai tany am-boalohany dia fiarahabana manokana. Ny endriny dia tsy mitovy amin'ny olona manana sata ara-tsosialy samihafa. Ny fiarahabana toy izany dia ampiarahina amin'ny fihetsika manokana ny tanana na ny tenda kely amin'ny loha. Izy io dia ahitana ihany koa tsiky milamina, izay maneho ny fanehoam-pitiavana sy ny toetra tsara amin'ny interlocutor. Ny endrika fiarahabana misimisy kokoa dia ny "spk" sy ny "mop speck". Krap dia mitaky ny fampiasana ny posture manokana - midina ny lohalika miaraka amin'ny valahany mihemotra amin'ny ombelahin-tongony. Ny "Mop krap" dia tanterahana amin'ny alàlan'ny fiarahabana avy amin'ny mpanjaka na olona ambony iray ary manondro ny "ronana lotus", izay tokony hatsangana amin'ny lohalikao ary hanao fihetsika izay tokony hasandratra ao amin'io toerana io ary avy eo dia "nidina" tamin'ny gorodona.
Manana toetra tony ny vahoaka Thailandey, tsy dia mifanohitra amin'ny fifandirana sy fanehoana ny hatezerana, izay hita taratry ny kolontsaina ao an-toerana. Hiezaka mihitsy aza izy ireo hamaha ny fifandirana miaraka amin'ny tsiky ary tsy mitady ny hanome tsiny ny hafa iray hafa. Ny iray amin'ireo fototry ny kolontsaina ao an-toerana dia ny foto-kevitra ny "sanuk", izay ao anaty lahatsoratra fohy fa tokony hankafy ny fiainana foana ny olona. Noho izany, ny Thais dia mora mihetsika amin'ny toe-javatra rehetra, na any am-piasana aza. Mandritra ny fifampiresahana, mila mampiseho fihetseham-po tsara ianao - fepetra ara-kolontsaina manan-danja izany.
Fihetsika amin'ny biby any Thailand
Ny fomba amam-panao Thai bebe kokoa dia ahitana fiheveran-tena tsara amin'ny biby. Io fotokevitra io dia avy amin'ny Buddhisme. Iray amin'ireo biby be mpitia indrindra any Thailandy ny elefanta.. Ny tena kolontsaina iray amin'ireo zavaboary ireo dia namolavola tao amin'ny firenena. Inoana fa namonjy ny olona tsy fahagola ny elefanta, nanampy tamin’ny fivelomana tao anaty ala tsy maty. Raha tsy nisy ny fanampian'ny elefanta, nipoaka ny sivilizasiona maoderina teto amin'ity firenena ity.
Muay Thai (art martial Thai)
Malaza any Thailandy ny fanatanjahan-tena. Miaraka amin'ireo fanatanjahantena fantatra sy tiana eran'izao tontolo izao dia misy ny havan-pirenena. Ny malaza amin'izy ireo dia nanjary muay thai, izay efa ela no nekena ary niparitaka lavitra an'i Thailand. Io karazana gadona haiady io dia antsoina hoe ady totohondry Thai.
Miady fe-potoana 5 ny ady Muay Thai, izay maharitra 3 minitra eo ho eo. Ny singa manan-danja amin'ny ady tsirairay dia ny dihy manokana sy ny vavaka Wye Crew, izay ambara ao amin'ny zoro fiadiana miaraka amin'ny mozika manokana.
Thailand dia firenena manana kolontsaina manankarena sy miavaka, miainga amin'ny fahagola. Nanomboka nivoatra ny zavakanto teto tamin'ny Moyen Âge.
Ny Thailand dia mirehareha ny maritrano tsy manam-paharoa izay ny tempolin-dry zareo dia tempoly sy lapa be voaravaka haosa sy sary sokitra. Eo amin'ny rindrina dia afaka mahita ny haingon-trano tany am-boalohany amin'ny endrika halatra sy tantaram-pivavahana.
Any Thailand, misy ny zava-kanto mampiavaka ny firenena, mizara ho 3 karazana: con, laconika, andevo. Ny tena jiro dia ny teatra an'ny pantomime con. Ny fampisehoana amin'izany dia miaraka amin'ny mozika nentim-paharazana sy dihy mahafinaritra. Theatre Lacon miorina amin'ny fihetsika, ny tsirairay avy dia manana dikany manokana. Seho an-tsehatra miaraka amin'ny mozika ihany koa ny fampisehoana Laconic. Mampiasa makiazy ireo mpisehatra. Ody an-trano - Ity dia fitambaran'isan'ny fotokevitra con et lacquer miaraka amina ballet interludes. Faritra iray hafa amin'ny zava-kanto nasionaly Thai teatra saribakoly sy alokaloka.
Antsasaky ny taona voalohany
Taom-baovao, izay antsoina hoe Songkhran eto.mankalazà mandritra ny telo andro (12, 13 sy 14 aprily). Any Thailand, ireo andro ireo no fiandohan'ny lohataona astronomika. Zatra ho an'ny vahoaka Thai ny handatsaraka rano amin'izy ireo mandritra ny fankalazana ny Songkhran. Amin'izao andro izao, ny fombafomba ara-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an'i Buddha dia tanterahina ihany koa.
Miaraka amin'i Songkhran, ry zareo no ankalazaina eto amin'ny tontolo tandrefana Taom-baovao sy krismasy. Na izany aza, ampahany lehibe amin'ny mponina dia mahita azy ireo ho toy ny andro mahazatra, tsy manisa ny fialantsasatra. Na dia any amin'ny tanàn-dehibe aza dia ankalazaina be izy ireo, satria be ny mpizahatany no mivory ao. Naverina tamin'ny fomba ofisialy tany Thailand ny 31 taom-baovao tamin'ny 1940 desambra, niverina tamin'ny XNUMX, hanatsarana ny fifandraisana amin'ireo firenena tandrefana.
Ankoatr'izay, misy Taom-baovao faha-3nankalazaina teto amin'ity firenena ity ny Bodista, izay ankalazaina amin'ny tapaky ny volana Desambra.
May ny volana fanokafana ny vanim-potoana fambolena vaovao. Nankalazaina tamin'ity volana ity mpanjaka andiany fialantsasatra. Ny tena andro iray itazonana azy ao anatin'ny taona tsirairay dia faritan'ny mpanandro mpanjaka. Ny mpanjaka dia toy ny angadin'omby indrindra, izay manangona tany kely eo akaikin'ny Grand Palace, izay misy ao an-drenivohitra, miaraka amin'ny karama masina tamin'io andro io. Fafazan'ny tovovavy ny vary ao an-dabokala nataony. Na amin'ity andro ity aza, misy vinavinaina momba ny orana, izay tokony hianjera mandritra ny taona.
Tamin'ny volana Mey, nandritra ny volana feno, misy daty telo manan-danja mifandraika amin'i Buddha - ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany, ny andro fahazavana sy ny andro hahafatesany (parinibbana).
Andiany faharoa amin'ny taona
Kathin - fialantsasatra maharitra iray volana ary hankalazaina amin'ny volana Oktobra na Novambra, miaraka amin'ny faran'ny fotoam-pijinjana ny vary. Amin'ny andro fialantsasatra dia mitsidika tempoly sy manolotra fanomezana ho an'ny moanina ny Bodista.
5 Desambra, andron'ny rain'i Thailand. Mazava sy mazava ny daty nahaterahan'ny King Rama IX, izay be fanajana indrindra any Thailandy, fa maty izao.
Thailand dia firenena tena mahaliana sy lalina. Aza hadino koa ny mihevitra fa torapasika fotsiny i Thailand, masaka ary tsaramaso an-tanànan'i Thailand. Raha ny marina, ity firenena ity, ny filozofia sy ny kolontsain'izy ireo dia afaka tonga, ho an'ny maro amin'ireo lafiny, ohatra tokony harahina amin'ny firenena maro amin'ny tontolo tandrefana. Avy any Thailandy dia tsy hiverina mitovy amin'izany ianao! 🙂
Eny tokoa! 🙂
Thailand no firenena voalohany nitsidika ahy tany SEA.
Ary te-hiteny aho fa tena mampientanentana tokoa ny Sabai, Sanuk, Suai!
Ny tarehy mitsiky toy izany, toy ny any Thay, dia mety tsy ho hita any an-toeran-kafa.
Nandritra ny herinandro nijanonana dia nanomboka nitsiky izy :). Toa mampita izany
Eny, ary, raha ny marina, milamina ihany ny Thais, araka ny fahazoako izao (taorian'ny Sri Lanka), fa singa iray amin'ny filozofia koa izy ireo.
Amin'ny ankapobeny ... manana filozofia mahafinaritra izy ireo 🙂
Izaho manokana, tamin'ny voalohany dia nieritreritra toy izany ihany koa aho, saingy taty aoriana, taorian'i Sri Lanka sy Bali dia niova kely ny saiko. Raha ny hevitro dia mihidy amin'ny tenany ihany i Thais, ary mpizahatany ho azy ireo ny mpizahatany fa tsy olona. Toy izany koa any Sri Lanka, any amin'ny faritra tsy mpizahatany azy no misokatra kokoa sy tso-po ny olona. Tsy mbola nisy fahatsapana fa niverina tany amin'ny renibenao be fitiavana ianao tamin'io fahazazana io, izay nahafaly anao ny olon-drehetra nahita anao foana. Any Thailand, eny, ny rehetra dia mitsiky, saingy izany dia fananan'izy ireo bebe kokoa noho ny fanerena ara-panahy, toy ny any Sri Lanka, na India, na any Bali.
Izany no hevitro. Tsy omeko an'iza n'iza izany.
fantatrao .. raha tsy an'izany lalana bangla rehetra izany sy mandeha an-dalambe ... dia mety ho tsara ny toe-tsaina amin'ny kolontsaina Thai.
Rehefa dinihina tokoa, ireo sabai sanuk sy suai rehetra ireo dia tena milay ary tiako ho mitovy eo amin'ny trano izy.
Saingy ny zava-misy fa i Thailand no firenena be mpandady indrindra amin'ny resaka fizahan-tany .. dia mamadika an'io filozofisialy malaza io ho angano mahazatra ho an'ny mpizahatany.
Salama sawatdee dia nanomboka tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. Talohan'io, nifanena tamin'ny mponina ny mponina tao: «Efa nisakafo ve ianareo?
Vaovao mampihomehy). Misaotra nizara